မြန်မာနိုင်ငံရှိ အင်တာနက် - ဝီကီပီးဒီးယား
သင် တည်းဖြတ် နိုင်သည်။ လမ်းညွှန် ဖတ်ပါ။ (December 2013)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးသော အင်တာနက်အဆက်အသွယ်များကို ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကတည်းက အသုံးပြုနေပြီ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ အစပိုင်းတွင် အင်တာနက်ဆင်ဆာပြုလုပ်သည်များကို သိသိသာသာပင် ဖြေလျော့ပေးခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ မတိုင်ခင်က တပ်မတော်အစိုးရသည် ဆော့ဖ်ဝဲကို အခြေခံသည့် ဆင်ဆာပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှုများကို ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ရန် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အင်တက်နက်အသုံးပြုသူအရေအတွက်သည် ၁၂.၆% တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် မိုဘိုင်းအင်တာနက်သည် 3G အင်တာနက်ကို ရနေပြီ ဖြစ်သည်။ အင်တာနက်များကို ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့် တယ်လီနော၊ အမ်ပီတီ၊ အူရီဒူးတို့က ထောက်ပံ့ပေးထားကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်ဆုံးအဆင့် ဒိုမိန်းသည် .mm ဖြစ်သည်။
၁ အင်တာနက် ရရှိအသုံးပြုခြင်း
၁.၁ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ အင်တာနက်ကဖေးများ
၁.၂ အင်တာနက် ဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်း
မြန်မာတယ်လီပို့ (ယခင် - ပုဂံဆိုက်ဘာတက်)၊ ရတနာပုံ တယ်လီပို့၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဗဟိုဝန်တောင်မှုမျာ (ITCS), Red Link Communications, satellite internet provider Skynet, Frontiir, နိုင်ငံပိုင် MPTနှင့် Kinetic Myanmar Technology တို့သည် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတိုင်ခင်က အင်တာနက်ကဖေးဆိုင်များသည် အသုံးပြုသူများအတွက် အခြေခံကျသည့် အသုံးပြုရာနေရာများ ဖြစ်ကြသည်။ အများစုသည် မတူညီသော ဆော့ဖ်ဝဲများကို အသုံးပြုပြီး အစိုးရ၏ proxy servers ကို ဖြတ်ကျော်ကာ အသုံးပြုကြသည်။ အင်တာနက်ကဖေးများတွင် အသုံးပြုမှုသည် ဈေးသက်သာသည့် မိုဘိုင်းအင်တာနက်များ သုံးစွဲနိုင်လာသည့်အခါ အသုံးပြုမှု ကျဆင်းလာခဲ့သည်။ သို့သော် အင်တာနက်ကဖေးဆိုင်များသည် လက်ရှိအချိန်အထိ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုနေတုန်း ဖြစ်သည်။ ဘလော့ရေးသားခြင်းနှင့် အခြားသော မိုဘိုင်းကိရိယာများဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် မဖြစ်နိုင်သည့်၊ လုပ်ဆောင်ရန် ခက်ခဲသည့် ကိစ္စများအတွက် အသုံးပြုကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အင်တာနက် ဝင်ရောက်အသုံးပြုမှုနှုန်းသည် အလွန်ပင်နည်းသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ အစိုးရ၏ တန်ဖိုးအခအပေါ်ရှိ ကန့်သန့်ချက်များနှင့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦတို့ကို ချို့ယွင်းမှုကြောင့် ဖြစ်သည်။ World Internet Stats ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လရှိ ကိန်းဂဏန်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အင်တာနက်အသုံးပြုသူ အရေအတွက်သည် ၅၃၄၉၃၀ ကျော်ရှိသည်။ နိုင်ငံ့စုစုပေါင်းလူဦးရေ၏ ၁ % ပမာဏ ဖြစ်သည်။ အရေအတွက်များသည့် အဓိကအသုံးပြုသူများသည် ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့များမှ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ၄၂ မြို့သည် အင်တာနက်အသုံးပြုလို့ ရသည်။ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့ပြင်မှ အသုံးပြုသူသည် ၁၀၀၀၀ ကျော် ရှိသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံ၏ အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု ၄၀,၀၀၀ မှ အများစုသည် ADSL circuits များ ဖြစ်ကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် dial-up,satellite terminal, and WiMax တို့ ဖြစ်လာကြသည်။ MPT က မန္တလေးတွင် fibre-to-the-home စမ်းသပ်မှုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပုံစံတူ စမ်းသပ်မှုများလည်း ရန်ကုန်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်တွင် တယ်လီနောမြန်မာ၏ အမှုဆောင်အရာရှိက တယ်လီနောအသုံးပြုသူများ၏ ၅၅% ဖြစ်သည့် ၁၀ သန်းသော အသုံးပြုသူများသည် ဒေတာသုံးသူများ ဖြစ်သည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အင်တာနက်သုံးသူများသည် အနည်းဆုံး ၅.၅ သန်းသို့ တိုးတက်လာသည်။ ကမ္ဘာ့အင်တာနက်စာရင်းကိန်းဂဏန်းများအရ အင်တာနက်အသုံးပြုသူများသည် နိုဝင်ဘာလ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် လေ့လာမှုတစ်ရပ်အရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဘလော့ရေးသားခြင်းသည် လျှင်မြန်စွာ ကြီးထွားလာသည့် အင်တာနက်အသုံးပြုမှု ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစတင်ကာ ၂၅ % တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် သိပ္ပံနည်းကျမလုပ်ခဲ့ရသည့် လေ့လာမှုကမူ အောက်ပါအချက်အလက်များ တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဘလော့များသည် ဖျော်ဖြေရေး (၁၄ %)၊ နည်းပညာ၊ ကွန်ပျူတာ နှင့် အင်တာနက် (၁၇ %)၊ စာအုပ်နှင့် စာပေ (၉ %)၊ ဝါသနာများနှင့် ခရီးသွား (၆ %)၊ နိုင်ငံရေး (၅ %)၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု (၄ %)၊ အခြားသော အကြောင်းအရာများကို ရေးသားကြသည်။
မြန်မာဘလော့ဂါများ၏ ၅၂ % သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ အသုံးပြု ရေးသားကြသူများ ဖြစ်သည်။ ၄၈ % ကမူ နိုင်ငံခြားမှနေ၍ ရေးသားကြသည်။
၇၂ % သော ဘလော့ဂါများသည် ယောက်ျားများ ဖြစ်သည်။၂၇ % မှာ အမျိုးသမီးများ ဖြစ်သည်။
၇၇ % သည် တစ်ကိုယ်တည်းသမားများ ဖြစ်၍ ၁၄ % သည် လက်ထပ်ပြီးသူများ ဖြစ်သည်။
၃၀ % သည် အသက် ၂၆ - ၃၀ နှစ်၊ ၂၉ % သည် အသက် ၂၁ - ၂၅ ရှိကြသည်။
၈၀ % သော ဘလော့များသည် မြန်မာဘာသာဖြင့် ရေးသားကြသည်။ ၈ % သော ဘလော့များသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားကြသည်။ ၁၀ % သော ဘလော့များသည် အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာဘာသာ နှစ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားကြသည်။ အခြားကျန်ရှိသည့် ဘလော့များသည် လူမျိုးစုဘာသာစကားများဖြစ်သည့် ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း စသည့်ဘာသာစကားများဖြင့် ရေးသားကြသည်။
↑ Martin, Steven (2002). Myanmar (Burma), 8th Ed. Lonely Planet Publications. ISBN 1-74059-190-9။
↑ Two Telecoms Race To Wire Myanmar။
↑ Myanmar Internet Usage and Telecommunications Reports။
↑ Country Code List: ISO 3166-1993 (E)။ American National Standards Institute, Inc.။ 12 November 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "The Internet in Burma (1998-2009) ", Mizzima News
↑ "Company ataglance", Yatanarpon Teleport Co., Ltd.
↑ "New consortium to shake up IT sector", Ye Kaung Myint Maung, Myanmar Times, vol.19, no.370 (11–17 June 2007)
↑ , Information Technology department, Ministry of Communications, Posts and Telegraphs, accessed 10 June 2011
↑ "Myanmar Internet Provider", Guide for Myanmar 2007
↑ "Internet service hampered as Myanmar Teleport server breaks down", Mizzima News Agency, 10 February 2009
↑ "No More Proxies: Myanmar Teleport", Saw Yan Naing, The Irrawaddy Publishing Group, 29 May 2008
↑ "Bypassing Internet Censorship in Burma / Myanmar", VPNHero.com, 16 March 2011
↑ Google Public Data: Burma Internet penetration။ Google.com။ 13 April 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Asia", Internet World Stats, 23 September 2013. Retrieved 31 October 2013.
↑ Wai-Yan Phyo Oo and Saw Pyayzon (30 July 2010). "State of Internet Usage in Myanmar" (in Burmese)3(18): 1–2.
↑ "Competition, watch out’ says Telenor Myanmar CEO, as subs over 10 million | The Myanmar Times
↑ http://www.internetworldstats.com/asia.htm#mm, Internet World Stats, 15th November 2015.
↑ "Blogging Increases 25% Within A Year” (Blog Yay Thar Hmu Ta Nhit Ah Twin 25 Yar Khaing Hnoan Toe Lar), Myanmar Internet Journal, 17 December 2010
↑ “Myanmar Blogger Survey 2009”, Nyi Lynn Seck, Myanmar Blogger Society, Rangoon, slides,2February 2010
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြန်မာနိုင်ငံရှိ_အင်တာနက်&oldid=414281" မှ ရယူရန်
December 2013 မှ တည်းဖြတ်ရန်လိုသော ဝီကီပီးဒီးယားဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၈၊ ၁၅:၅၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။